Shiinaha oo La Keenay Quudiyaha Firfircoon ee Ku -Meel Gaarka ah ee Warshadda Shaaha Bariiska soy iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xidhmada King
Cabbirka Mashiinka Baahan
Markay maaddadu ka gudubto baakadda shaandhada ee taangiga, maaddada yar waxay ku dhici kartaa farqiga baarka shaandho, iyada oo aan la marin hannaanka burburka xiga, kaas oo leh saamaynta baaritaanka. Loo isticmaalo kaydinta ku-meel-gaadhka ah iyo gaadiidku waa qalalan yahay, socodka bilaashka ah ee cuntada iyo kuwa aan cuntada ahayn ayaa inta badan qulqulaya ama aan lahayn qulqulka kaydinta ku-meel-gaadhka ah iyo budada quudinta ama wiishka baaldiga cuntada granular ama shaashadda gariirka, waxay khuseysaa cuntada, qalabka, kiimikada iyo warshadaha kale, sida sonkorta, jajabka baradhada, soybeega, buskudka, bariiska, hadhuudhka, looska, qalabka kala duwan sida quudinta baaldika quudinta.
Waxay u isticmaashaa mabda'a korantada korontada, adeegsiga gariirka waxaa loo rari doonaa wiishka baaldi baaldi, hawlgal otomaatig ah. Naqshadeynteeda nadaafadda aadka u sareysa iyo dhismaha birta oo dhan ayaa xaqiijineysa in mashiinku ku habboon yahay codsiyada ugu baahida badan, waarta, fududahay in la nadiifiyo, iyo keydin la'aan, taasoo ka dhigaysa xulasho wanaagsan warshadaha cuntada.
1. Weelka waxaa lagu xardhay 304 walxo bir ah oo birta ka samaysan waana la kala diri karaa.
2. Baaxadda ayaa la hagaajin karaa wakhti kasta si loo xakameeyo socodka, ku habboon oo deggan.
3. Nooca electromagnet gariirka farsamada, qaab -dhismeed fudud, rakibid iyo dayactir habboon.
4. Quudiyaha (quudiyaha gariirka electromagnetic) gariirku waa mid deggan oo xoog badan, si gudbinta badeecaddu u noqoto mid isku mid ah.
5. Shaqo lagu kalsoonaan karo iyo cimri dheer.
6. Shaqo tayo sare leh oo lagu kalsoonaan karo.
7. Miisaan yar iyo cabbir yar.
8. Sawaxanka oo yaraada, isticmaalka korontada oo yar, wax saamayn ah ma leh waxyeellada, ilaalinta deegaanka mashiinka.
9. Dayactir hoose iyo dayactir fudud.
10. Hawlkarnimo sare iyo awood quudin oo ballaaran.
11. Wasakhowga wasakhda ayaa laga hortagi karaa marka la isticmaalo fiyuuska dhismaha ee ku lifaaqan.
12. Waxaa loo habeyn karaa hadba baahida macmiilka.
Hore: Shiinaha Factory xawaaraha hagaajin karo ururinta miiska Rotary ururiyay line pakcing
Xiga: Suunka xoqitaanka ee PP oo aad u fudud in la nadiifiyo
Nidaamka mashiinka xirxirida waajibaadka heesta toosan ...
Quuder gariir aan madaxbannaanayn oo isku xidhan oo loogu talagalay fo ...
Wiishka baaldiga ee rogaya, Wiishashka Cuntada, Wareega Suunka Gubashada, Xamuulka Fayadhowrka, Gudbinta Silsiladda, Z wiishka baaldi,